आठबीस नगर प्रकोप कोषमा सिदार्थ होटलको पच्चीस हजार ! – Enayanepal.com
आठबीस नगर प्रकोप कोषमा सिदार्थ होटलको पच्चीस हजार !
२०७७, ८ बैशाख सोमबार मा प्रकाशित
सुर्खेत, ८ बैशाख ।
दैलेखको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने आठबीस नगरपालिकाले कोरोना विरुद्ध निर्माण गरेको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा सिद्वार्थ होटलले २५ हजारको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । सोमबार कार्यालयमा होटल सञ्चालक एवम नेपाल तरुण दल आठबीस संयोजक महेन्द्रबहादुर माझीले उक्त चेक नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरेका हुन ।
‘विश्व नै कोरोनाबाट बच्न लडिरहेको बेलामा मैले मेरोतर्फबाट थोरै भएपनि राहत तथाविपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षासहित यो रकम सहयोग गरेको हुँ ।’ आठबीस नगरपालिका वडा नं. ४ खोलीबजारमा सिद्वार्थ होटल सञ्चालन गरिरहेका माझीले भने, ‘विश्व नै संकटमा परेको बेलामा हामी सबैले मिलेर यो विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प छैन ।’
चेक ग्रहण पछि नगरप्रमुख उपाध्यायले सहयोगकालागि माझीलाई धन्यवाद दिए । ‘नगरपालिकाले तपाईहरु सबैको साथ र सहयोगका कारण कोरोना विरुद्ध लड्ने योजना निर्माण गरि अघि बढिरहेको छ । यहाँहरु सबैको सहयोगले कोरानालाई हामी पराजित गर्न सफल हुने अपेक्षा छ ।’ उनले भने, ‘अन्य सहयोग गर्न चाहनेलाई स्वागत गर्न तयार छौं । सहयोगको लागि यहाँहरुलाई धन्यवाद छ ।’